Tag: nkwalite | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere otu ụlọ ọrụ ebe a na-ejide ụda data na-aga n'ihu, ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa (CPG). Companieslọ ọrụ CPG maara na Big Data dị mkpa, mana ha anabatabeghị ya na ọrụ ha kwa ụbọchị. Kedu ihe ngwugwu Ndị Ahịa? Ngwongwo ndị akpọrọ (CPG) bụ ihe ndị na-eri kwa ụbọchị nke na-achọ ngbanwe ma ọ bụ mmejuputa oge niile, dịka nri, ihe ọveraụveraụ, uwe, ụtaba, etemeete, na ezinụlọ
Tọzdee, Machị 14, 2019 Fraịde, Machị 15, 2019 Suzy Viola
Salons na-etinye ego n'ọtụtụ ebe ha, ndị ọrụ ha na ndị ọkachamara, akụrụngwa ha na ngwaahịa ha. Agbanyeghị, otu ihe ha na-eleghara anya itinye ego na ya bụ mkpọsa ahịa ha. Kedụ ka ndị ahịa ga - esi nweta ụlọ ebe ị na - achọ mma? Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa nwere ike ịbụ ihe aghụghọ aghụghọ ịchịkwa, ọ ka nwere ike ijikwa ya, ọ dịghịkwa mkpa ịtụ ụjọ. E nwere ọtụtụ nke echiche echiche gbalịrị na-anwale maka salons na-arụ ọrụ nke ọma na-adọta
Anyị na-achọ ịmepụta ụfọdụ nkwalite ruo nwa oge ugbu a, ma mgbe nhọrọ na ngwaọrụ bara ụba, ọ tụrụ m n'anya na enweghị ọtụtụ ndebiri kuki na-apụ ebe ahụ nwere ndekọ ndekọ egosipụtara. Nyocha a sitere na Easypromos na-enyere anyị aka ịhazi ụzọ ziri ezi, agbanyeghị! Easypromos weputara nsonaazụ sitere na Nnyocha Nlele Dijitalụ Dijitalụ ha nke na-eme ka a mata ọrụ nke onyinye na ịtụgharị ndị ọbịa na ndị nkwalite dịka